Certificate_in_Essential_Management_and_Leadership_Skills – Amazing Yangon
#အခမဲ့သင်တန်း မေလ(၆) ရက်နေ့စမည်။
ဓမ္မယာန-မဇ္ဈိမယာန လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့အစည်းမှ ကြီးမှုးကျင်းပသော #Management_Intellect Institute ၏ CSR အစီအစဉ်ဖြင့် #Essential_Management & #Leadership_Skills သင်တန်းအား 6.5.2018 ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ်ပါမည်။
ဤသင်တန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဘွဲ့ကြိုတက်ရောက်နေသူများ၊ ဘွဲရရှိပြီး လုပ်ငန်းခွင် ၀င်ရောက်ရန် ပြင်ဆင်နေသူများ၊လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်နေသူများ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ခေါင်းဆောင်မှု သဘောသဘာဝ နားလည်သိရှိစေရန် နှင့် မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များ စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာစေရန် ဖြစ်ပါသည်။
#Certificate_in_Essential_Management_and_Leadership_Skills တွင်သင်ကြားရမည့် ခေါင်းစဉ်များမှာ-
3. The 21 Indispensable Qualities ofaLeader
5. Organizational Structure and HRM
7. Job Analysis and Design
သင်တန်းကြေး – အခမဲ့ (စာရွက်စာတမ်းကြေး ပေးစရာမလိုပါ။)
သင်တန်းစတင်လက်ခံမည့်ရက် – 2.4.2018
သင်တန်းဖောင်ပိတ်မည့်ရက် – 30.4.2018
သင်တန်းအား အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားပြီး ၊ သင်တန်းအချိန်ပြီးမြောက်သည် အထိ တက်ရောက်နိုင်သောသူများသာ သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့် လျှောက်ထားစေလိုပါသည်။ သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့် ရသူများအား (၃၀-၄-၂၀၁၈) ရက်နေ့နောက်ဆုံးထား အကြောင်းကြားပါမည်။
ဤနေရာတွင် Online မှ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည် https://info.managementintellect.com (သို့) ကိုယ်တိုင်လာ​ရောက်​လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
သင်တန်းစတင်မည့်ရက် – 6.5.2018 (တနင်္ဂနွေနေ့)
သင်တန်းပြီးဆုံးမည့်ရက် – 10.6.2018 (တနင်္ဂနွေနေ့)
သင်တန်းကြာမြင့်ချိန်- (၆)ပတ်၊ ၁ ပတ်လျှင် တနင်္ဂနွေနေ့ တစ်ရက်တည်းသာတက်ရပါမည်။ စုစုပေါင်း နာရီ (၂၄) နာရီ၊
သင်တန်းအချိန် – တနင်္ဂနွေနေ့ (နေ့လယ် ၁း၀၀ နာရီ- ညနေ ၅း၀၀ နာရီထိ )
သင်တန်းတည်နေရာ- “ပြည်တော်ဦး ဗုဒ္ဓသာသနာ့ရိပ်မွန်”၊ကျိုက္ကစံဘုရားအနောက်၊​ကျောက်​စာ​တော်​ ​စေတီ​ဘေး၊ ကျောက်စာတော် ဘုရားလမ်း၊ ကျိုက္ကစံအနောက်ရပ်ကွက်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်ဒေသကြီး။
လမ်းညွှန်-YBS (၁၊၁၀၊၁၄၊၇၊၂၆၊၂၇၊၄၂၊၆၀) ကားများစီး၍ ၁၄/၁၅ လမ်းဆုံ မှတ်တိုင်(သို့) ကျိက္ကစံဘုရားလမ်းမှတ်တိုင် မှာဆင်းပါ။
ဤနေရာတွင် တည်နေရာ မြေပုံလမ်းညွှန် ကြည့်နိုင်ပါသည် https://info.managementintellect.com/location-map/
ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း-018561459 ၊ 09404066601 ၊ 09404066602
Enervon-C Zumba Thingyan